Chii chinonzi kutora huwandu? | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi kutora huwandu?
Chimwe chezvinhu chinonyanya kukanganisa mutengo wemari yekuchengetedzeka huwandu hwezvibvumirano. Kusvika padanho rekuti ndeimwe yedhata yaunofanirwa kutarisa usati wavhura zvigaro mumisika yemari. Kwete chete zvine chekuita neyakaenzana, asi zvakare neayo fixed income kana kunyangwe kubva pane dzimwe sarudzo. Nezvikonzero zvakawanda zvatinozofumura muchinyorwa chino kuti iwe ugone kuzvinzwisisa zvakajeka. Hazvishamisi kuti iwe unogona kuona kuti kukosha kunokwira kana kudonha zvichibva pakusimba kwaro.
Kutanga, huwandu hwekutengesa hunoreva huwandu hwezvivakwa zvinotengeswa munguva yakati. Kune rimwe divi, inowanzo kuverengerwa sehuwandu hwehuwandu hwechengetedzo yezvose zvivigiro zvinotengeswa pamusika. Pachave pasina dambudziko kusangana naye nekuti anouya mune ese nyanzvi midhiya pamazuva ese ekutengesa. Izvo zvinokanganisawo kana zvichibva kumakambani makuru, epakati kana madiki akanyorwa, sezvaungaona kubva zvino zvichienda mberi.
Maererano neSelf Bank, “huwandu hwezvibvumirano hunoratidza kufarira kwevanosima mari mune chimwe chiitiko. Tichifunga nezvevhareji vhoriyamu, kune kuchengetedzeka kwemamiriyoni emazita anotengeswa pazuva, nepo isu tichigona kuwana mamwe ayo asingatengeswi mazana mashoma. Ichi chinhu chinonakidza kwazvo chaunofanirwa kuongorora usati wasarudza imwe kana imwe chengetedzo kana pfuma yemari. Nekuti zvirokwazvo, inogona kukupa chimwe chiratidzo pane zvaunogona kuwana kana uchitanga kudyara. Uye nekudaro, zviri nyore kuti usabvisa pane izvi zvakakosha izvo zvatiri kutaura nezvazvo.
1 Chibvumirano vhoriyamu: kutaurirana
2 Mune mari yakatarwa
3 Mahoridhe mumusika weSpanish wemusika
4 Akanyanya kwazvo mavhoriyamu
5 Maka zvido zvevatengesi
6 Perekedza mafambiro
Chibvumirano vhoriyamu: kutaurirana
Kubva pane iyi yakajairwa mamiriro, iyo yeSpanish misika yemusika yakatengesa muzvikwereti huwandu hwe54.023 mamirioni euros mumwedzi wapfuura. Kana chii chakafanana, 54,5% kupfuura mwedzi wapfuura. Pane kupokana, iyo huwandu hwekutaurirana Mumwedzi waive mamirioni 4,3, 45,2% kupfuura munguva yapfuura.
Kune rimwe divi, musika weZvemari Zvinobva pamusika wakawedzera kutengeserana muFutures paIBEX 35 uye Futures uye Sarudzo paMini IBEX ne 27,7%, 44,6% uye 19,2%, zvichiteerana, zvichienzaniswa neyaitengeswa mumwedzi wapfuura. Mune iyo yakaunganidzwa yegore pane kuwedzera kwehuwandu hwakatengeswa mu Nguva yemberi pane IBEX 35 3,6%. Nzvimbo yakavhurika inowedzera muStock Futures uye Sarudzo dzeStock zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura ne27,3% uye 9,3%, zvichiteerana.
Mune mari yakatarwa
Nezvemari yakatarwa, vhoriyamu yakatengeswa mumwedzi wakaongororwa yakakura nekusa pfuura 106,6%, zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura, nekuda kwe kondirakiti yezvikwereti zveveruzhinji. Iko kuwedzera kunoenderana nemwedzi gumi yekutanga yegore kwakamira pa46,5%. Kunyangwe pane zvinopesana, huwandu hwenyaya nyowani dzakabatanidzwa mukutaurirana muMARF dzakasvika mamirioni mazana manomwe nemakumi manomwe nemaviri ema euro, anomiririra kuwedzera kwe762% zvichienzaniswa nemwedzi mumwe chete wegore rapfuura.
El akaunganidza vhoriyamu pakupera kwemwedzi gumi yekutanga yegore yaive 5.168 mamirioni euros, kuwedzera kwe50,1%. Iyo yakatanhamara vhoriyamu iri kutenderera mumusika uyu inosvika 3.306 mamirioni euros, ndokuti, pamwe nekufungidzirwa kukura kwe40,7%. Iyi data inoita kuti inyanye kukosha kuti kukosha kukuru kunofanirwa kupihwa kune aya akakosha masiteki emusika. Kupfuura vamwe vawajaira kushanda navo mukuzadzikiswa kwemari, kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha maonero ekuona.
Mahoridhe mumusika weSpanish wemusika
Kuti utarise izvo zvinomiririrwa nevhoriyamu yekutengesa, zororo revanhu muzvikamu zveSpanish zvichave zvakakosha zvakanyanya. Mupfungwa iyi, BME, iyo inosangana, pakati pemamwe makambani, mana eSpanish stock stock, iyo Sarudzo uye Futures musika (MEFF) uye iyo AIAF Yakagadziriswa Mari yemusika, yakagadzika kalendari yezvikamu zve2019, vachibvumirana kutarisa mazuva asiri ekushandira kuitira zvinangwa zvekushanda:
Chipiri, Ndira 1
Chishanu, Kubvumbi 19
Muvhuro, 22 Kubvumbi
Chitatu, May 1
Chitatu 25 Zvita
China, Zvita 26
Ivo vanowanzoenderana nekarenda yakatsanangurwa nemisika yepasi rose yezvemari sezvo paine kukosha kwakaringana mune dzese. Rangarira kuti kune zvimwe mabiko ekupembera uko iyo mari inoshanduka isingavhare, zvese yenyika uye kunze kwemiganhu yedu. Uye iyi poindi inogona kukutungamira iwe kuti uite iyo isinganzwisisike chikanganiso mumabasa ako pamusika wemasheya. Sezvo zvichave zvakaitika kwauri pane kanopfuura kamwe chiitiko mune apfuura maekisesaizi. Neichi chikonzero chaicho zvichave zvakafanira kuti iwe utore hanya karenda yemari yenyika.
Akanyanya kwazvo mavhoriyamu
Kune rimwe divi, huwandu hwezvibvumirano hwakanyanya kukosha kana hwakanyanya kukwirira, imhaka yekuti kune kufarira kwakanyanya kune vanoita mari kuti vavhure zvinzvimbo mumutengo unokosha uri mubvunzo. Inowanzoenderana nenzvimbo dzakasimukira, ndiko kuti, kana paine kukwira kwemitengo ine huwandu hwepamusoro hwekutengesa, zvinoreva kuti panogona kunge paine kuenderera mune kukwidza. Zvakare nenzira yakapesana, zvichiratidza kuti iwo ekudzika ane zvakawanda zvinoenderana. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti uongorore iyi data inokodzera kuratidza kuti kuenderera mberi kwekukosha kungave kuri mumazuva anouya kana kunyangwe mavhiki.
Kune rimwe divi, kuwedzera kunoshamisa muhuwandu hwekutengesa kunoratidza kuti chimwe chinhu chakakosha chiri kuitika mukuchengetedzeka kuri kutaurwa. Chinhu chisingawanzo kuitika uye icho chinonyevera kuti iwe unofanirwa kuziva nezve a aakatipa mamiriro. Izvi zvinoitika kazhinji ne diki- uye epakati- chivharo masheya anobuda kubva pane imwe nguva yekutengesa kuenda kune imwe nekutengesa kusiri kwechokwadi mumisika yemari. Inogona kuratidza kuti kumuka kana kudonha mumutengo wayo kunogona kuve kwakanyanya kubva panguva idzodzo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha.
Maka zvido zvevatengesi
Huwandu hwechibvumirano, kune rimwe divi, hwakaumbwa mu thermometer yakavimbika kwazvo pane kufarira kune varimi vadiki nepakati varimi vane chero nguva yakapihwa Zvese mune imwe pfungwa uye imwe, kana izvo zvakafanana, zvinoratidza kuenzanisa kana kutengesa zvinangwa zvakafanana. Mupfungwa iyi, iri rakavimbika paramende risingade ruzivo rwakadzika kwazvo rwemisika yemari. Ingotarisisa kufamba kunoitika mumisika yemari kana zvimwe zviwanikwa zvemari uko iwe wakamira nguva dzose.
Ichokwadi kuti vhoriyamu yekutengesa haisi yakafanana nguva dzose, asi ivo vanosiyana kubva pane imwe nguva yekutengesa kuenda kune imwe. Aya zviito zvakajairika uye zvine musoro kuti zviitike, asi chakasarudzika chinhu ndechekuti vhoriyamu inochinja nekukurumidza. Kana izvi zvikaitika izvo zviri kukuudza iwe kuti chimwe chinhu chakakosha chiri kuitika pamwe nekukosha. Zvinogona kunge zvichikonzerwa nezvikonzero zvakasiyana kana zvikonzero uye izvo zviri zvemhando dzakasiyana. Kubva pane chakanyanya kufarira chikamu chevashambadzi vadiki nepakati kusvika pakupinda kwehomwe huru yekudyara mune yakatarwa kukosha. Iri ndiro dambudziko hombe raunofanirwa kuongorora typology yemafambiro aya.
Zano rekudyara iwe raunogona kushandisa kubva ikozvino kuenda mberi kutevera musika maitiro. Ndokunge, iwe paunoona kuonga mumutengo wemasheya ane yakanyanya kuwanda vhoriyamu yekutengesa, inofanirwa kuve iyo inotarisirwa chiratidzo kuvhura nzvimbo, kunyangwe kuburikidza nekutenga nehasha kwemari yemari. Uye nenzira yakatarisana, zvakangofanana, ndiko kuti, kuvhara nzvimbo pamberi pekuti mukana wekuti kuwira uku kuwedzere mumazuva anotevera kana vhiki. Icho chiito chakatendeseka nekuti kufamba uku mumisika yemari hakuwanzo kukanganisa.
Kune rimwe divi, haufanire kuvakanganisa ne kudzokorora kuita uye kufarira kune chikamu chevatengesi kunowedzera zvishoma nezvishoma. Asi sekuita kune zvakateedzana zvekudzikira izvo zvaitika uye zvaisa kukosha mune yakanyanya kudikanwa mamiriro nekuda kwemitengo yemakwikwi chaizvo iyo yainoratidza panguva iyoyo chaiyo. Sezvaungave iwe wakamboona, aya maviri mafambiro akasarudzika akasiyana anoda kurapwa kwekudyara izvo zvakapesana zvachose kubva kune ese maonero maonero. Kiyi yekubudirira kwekuvhiya iri mukusavhiringidza ivo.
Mukupfupisa, iro vhoriyamu rekushandira rine rakanyanya kukosha uye kukosha kupfuura zvaunogona kufunga kubva pakutanga. Kusvika padanho rekuti inogona kukupa iwe ekupinda uye yekubuda nhungamiro mune imwe mari yemari, chero zvayaive. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune zvirinani mamiriro ekuita kuti ako mashandiro abatsire mumari dzemari. Kuwedzera pakuve chombo chine simba chekudzivirira nzvimbo dzako kubva kune chero mhando zano. Chero zvazvingava, kiyi yekubudirira kwekuvhiya iri mukusavhiringidza ivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chinonzi kutora huwandu?
Iyo Ibex 35 muchiitiko chekuzotevera: zvekuita?
Ndeapi misika yeUSDC?